Buugaag loogu talagalay Shahaadada LPIC ee daabacaadda ENI | Laga soo bilaabo Linux
Daabacadaha ENI, Daabacaha 1aad ee buugaagta sayniska kombiyuutarka ee Isbaanishka, ayaa soo bandhigaya Buugaagta diyaarinta shahaadada LPIC. Kani waa daabacaadii 2aad ee mid kasta, oo loogu talagalay barnaamijka shahaadaynta ee Machadka Xirfadaha Linux taas oo, sidaad ogtahay, ay sii kordheyso shuruudda shaqaaleysiinta ama marin u helidda jago maamul.
Si lagaaga caawiyo inaad si wax ku ool ah ugu diyaar garowdo shahaadadan, buugaagtu waxay daboolayaan dhammaan ujeeddooyinka imtixaanka rasmiga ah waxaana qorey tababarayaal xirfadlayaal la aqoonsan yahay, sidoo kale la-taliyeyaal, oo laga aqoonsan yahay Linux, sidaa darteed aqoontooda barbaarinta iyo farsamada waxay u horseedaysaa qaab cad oo muuqaal ah. , heer farsamo oo aad u sareeya.
Cutub cutub, waxaad awoodi doontaa inaad ku ansaxiso aqoontaada aragtida ah, adigoo uga mahadcelinaya su'aalaha iyo jawaabaha badan ee muujiya waxyaabaha aasaasiga ah iyo astaamaha gaarka ah ee fikradaha la daboolay. Cutub kasta wuxuu ku egyahay waxqabadyo qaarkood, oo aad ku cabbiri karto madaxbanaanidaada kuna kasbato xirfado farsamo xaaladaha dhabta ah.
In lagu daro barashada sheyga iyo fikradaha, aalad muhiim u ah diyaarinta gaarka ah ee shahaadeynta ayaa lagu daray: helitaanka bilaashka ah ee imtixaanka jeesjeeska ah ee internetka, oo loogu talagalay inaad ku tababbarto xaaladaha tijaabada u eg. Websaydhka, su'aal kasta oo la waydiiyo waxay qayb ka tahay fikradda caddaynta jawaabahana waxaa looga faaloodaa hab ku filan oo lagu garto qodobbada ay tahay inaad dib u eegto.
Ilaa 25/07/2014, daabacaha wuxuu u fidiyaa kuwa raacsan Desdelinux qiimo dhimis 30% ah ee buugaagta nooca internetka ah. Si aad u yeelato, waa inaad gashaa lambarka xayeysiinta DSDLN0714 markaad iibsaneysid boggaaga, www.editions-eni.com.
Ku saabsan ENI Editions:
Daabacadaha ENI, 1er Daabacaha buugaagta sayniska kombiyuutarka, wuxuu abuuraa oo uu daabacaa aalado lagu tababaro kombuyuutarka, oo loogu talagalay dadweynaha iyo xirfadleyda labadaba. Qiyaastii konton sii-deyn cusub ah sanadkiiba, laga bilaabo shabakadaha kombiyuutarka illaa suuq-geynta elektaroonigga ah, iyada oo loo marayo horumarinta ama qaabeynta, buugaagtiisu waxay daboolayaan dhammaan aagagga cilmiga kombuyuutarka waxayna gaarayaan dhammaan dhagaystayaasha, laga bilaabo bilowga ilaa khabiirka.
Si aad u ogaato wax badan, www.editions-eni.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » 30% qiimo dhimis buugaagta loogu talagalay Shahaadada LPIC
faafaahin wanaagsan ... 😉
Waxaan marwalba layaabay sida ay u adagtahay shahaadooyinkan, maalmo kahor waxaan arkay qaar kamid ah su'aalaha imtixaanka iyo qof maareeya nidaamka Linux maalinba maalinta ka dambeysa wax weyn maahan, waxaa jira su'aalahooda dhibaatada leh.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka iyo dhimista 😀
Ma ogtahay waxa hagaajinta nooca labaad uu leeyahay? shabakadda waxba kamaan helin.